कोरोनाको कहर | Aaja ko Shiksha
२०७८ मंसिर ११ गते / 27th Nov 2021, Saturday
समाचार , मुख्य समाचार , सम्पादकीय
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीले यतिबेला विश्वका सबै मानव जीवनलाई जोखिममा पारिरहेको छ । कोरोनाको संक्रमणमा परिने त्रासदीमा विश्व गुज्रिरहेका बेला नेपाल पनि उच्च जोखिममा रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले सचेत गराइसकेको छ । भलै नेपालमा यसबाट संक्रमित व्यक्तिहरु रहेको पुष्टि भइसकेको छैन । यस्तो जोखिका बेला हाम्रा विद्यालय तथा उच्च शिक्षालयहरु सञ्चालन भइरहेका छन् तर निर्धक्क भने छैनन् । एउटा व्यक्तिबाट अर्काेमा संक्रमित हुने यो महामारी केहीगरी लाखौं बालबालिका पढ्ने हाम्रा विद्यालयहरुमा संक्रमण भयो भने कति भयावह होला ? आँकलनभन्दा टाढाको अवस्था ब्यहोर्नुपर्ने दिन आउन सक्छ ।
कोरोना भाइरस कसरी कुन अवस्थामा सर्न सक्छ भनेर अहिले राष्ट्रिय आमासञ्चारका माध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म सचेत गराइएका छन् । यद्यपि, यतिले पुग्ने देखिँदैन । देशभर इन्टरनेटको पहुँच छैन । त्यसो त, राष्ट्रिय मिडियाहरुको पहुँच पुग्न नसकेका ठाउँमा पनि विद्यालय छन् । सरकारले नै भिडहरुमा नजान, कार्यक्रम नगर्न अनुरोध गरिसकेको स्थिति हो । तर, हजारौं जम्मा हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइइ) यही चैत ६ बाट शुरु हुँदैछ । विद्यालयहरुमा धमाधम अरु कक्षाका परीक्षा पनि चलिरहेका छन् । यो अवस्थामा संक्रमण बाजा बजाउँदै हुने पनि होइन । यूरोप तथा पूर्वी एशियामा सबै विद्यालयहरु बन्द गरिएको अवस्था छ । यद्यपि, हामीकहाँ यो सावधानी अपनाइएको छैन । यसैले ठूलै क्षति पर्खिएको पो हो कि भन्ने भान परिरहेको छ ।
अब गुनासो गरेर मात्र हुँदैन । यस्तो जोखिममा सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता हो जोगिनु । यसमा जति सरकार चनाखो हुनुपर्ने हुन्छ, त्यत्ति नै सचेत अभिभावक, विद्यार्थी स्वयं र विद्यालय सञ्चालक पनि हुनै पर्छ । विद्यालयमा सामान्य जाँच गर्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्न । मास्कसम्म लगाइएको पनि पाइँदैन्न । यो डरलाग्दो हेलचेक्राइ हो । परीक्षा र पढाइ दोस्रो प्राथमिकता हुन् । आवश्यक पर्दा विद्यालयहरु एकैपटक बन्द गर्न/गराउन सरकार तयार हुनु पर्छ । विद्यालय सञ्चालक र अभिभावकले पनि यसमा साथ दिनु पर्छ । त्यसो त, संघीय संसदमा समेत सांसदहरुले विद्यालय बन्द गराउन सार्वजनिक महत्वको विषयका रुपमा माग गरेका छन् । बेलैमा सचेत हौऔं ! महामारी आउनुभन्दा अघि नै यसबाट बच्न सबैले हातेमालो गरौं । निर्णय अप्रिय नै हुनसक्ला, ज्यानलाई जोखिमबाट बचाउन त्यो महत्वपूर्ण हुन सक्छ ।